यस्तो अ’वस्थामा भे’टियो मो’टरसाइकलबाटै बा’घले झ’म्टिएर ल’गेको म’हिलाको श’व’ – AB Sansar
January 2, 2021 January 3, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on यस्तो अ’वस्थामा भे’टियो मो’टरसाइकलबाटै बा’घले झ’म्टिएर ल’गेको म’हिलाको श’व’
कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका वडा नं. ४ कौवापुरकी ५० वर्षीया नन्दकली थापाको श व फेला परेको छ। थापालाई गएराति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघले मोटरसाइकलबाटै झम्टिएर लगेको थियो। जि ल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र खड्काले श निबार मध्यान्ह १२ ब जेतिर थापाको श व घ टनास्थलनजिकै फेला परेको बताए।
‘घटनास्थलभन्दा तीन सय मिटर दक्षिण पश्चिमा उहाँको श’व फेला परेको छ,’ डिएसपी खड्काले भने, ‘बाघले अनुहार र दुबै पिडौला खाएको छ। देब्रे खु’ट्टा श’रीरदेखि अ’लग गरेको अव’स्थामा श’व फे’ला प’रेको छ।’ शुक्रबार राति पूर्व बाँकेको कोहलपुरबाट पश्चिम कैलालीस्थित घर जान लागेका आमा छोरा सवार मो’टरसाइकलमा बा’घले झ म्टिएर थापालाई घि’सार्दै जं’गलमा लगे’को थियो। मो’टरसाइकल उन’का छोरा २२ वर्षीय स’न्तोष थापाले च लाएका थिए।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शुक्रबार राति दश बजेतिर पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको सु.प.प १००८ प. ६८०१ नम्बरको मोटरसाइकल’को प’छाडि स’वार स’न्तोषकी आमा नन्दकली सवार थिइन्। छोरा सन्तोषले मोटरसाइकल अलि स्लो भएको समयमा बा’घले आ’मालाई झ’म्टिएर मो’टरसाइकलबाटै लगेको प्रहरी समक्ष ब ताएका छन्। बा’घको आ क्रमणबाट मोटरसाइकल ढ लेको र पछि आफूले नि’कुञ्जका सुर’क्षाक’र्मीलाई खबर गरेको सन्तोषले प्रहरीलाई भनेका छन्।
घटनास्थल पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत निकुञ्ज भित्रपर्ने नेपाली सेनाको अम्रेनी चेकपोष्ट भन्दा करिब ५/६ किलोमिटर पश्चिममा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। बा घले मो टरसाइकलमा झम्टिएर मानिस बेपत्ता पारेपछि नि कुञ्जको टोली र निकुञ्ज सुर’क्षार्थ ख’टिएको नेपाली से’ना हा त्तीबाट खो जीमा निस्के को भए पनि फेला पार्न सकेको थिएन।
शनिबार बि’हानैदेखि था पाको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरीको टोली र निकुञ्जको टोली खोजीमा ख टिएपछि थापाको श व बा घले खा एको अव स्थामा फेला प रेको डिएसपी ख ड्काले बताए। बा घले गु डिरहेको मोटरसाइकलमा झ म्टिएर मा निस मा रेको य स्तो घ टना हा लसम्म नेपा लमा सुनिएको थिएन।
सक्किगोनि’मा भु,त बनेकी गरिमा शर्मा मिडियामा,रियलमा त यति राम्री भनिन्- यति राम्रो भुत त देखेकै थि’ईन्, भन्दै जिस्का’ए (भि’डियो हेर्नुस)